FBS က ထရိတ်ဒါတွေအတွက် ဘလော့အသစ်တစ်ခုစတင်လိုက်ပါပြီ
ကျနော်တို့ဟာ ဖောက်သည်တွေနဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးနွေးထွေးဖို့နှင့် ကျနော်တို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေကိုပိုမိုမြင့်မားတဲ့အဆင့်တစ်ခုထိရောက်ဖို့လို အပ်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်. Forex လောကသားများနှင့်တွေ့ဆုံမှု - ဘလော့အသစ်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက FBS မိသားစုဝင်ပေါင်း များစွာရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဗဟုသုတတွေကို ဖြန့်ဝေပေးသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်.
ဒီဘလော့ကို FBS ထရိတ်ဒါများနှင့် [ပါတနာများ] အတွက် နွေးထွေးတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ် - FBS ရဲ့အလုပ်နှင့် ပတ်သတ်တဲ့ အမြင်သဘောထားတွေ၊ဖောက်သည်တော်ကြီးများရဲ့ အောင်မြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊အင်တာဗျူးတွေနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများစွာကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ.
သင့်ရဲ့ ဈေးကွက်ကို တိကျတဲ့နည်းလမ်းတွေနှင့်ချဉ်းကပ်ဖို့ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ထရိတ်ဒါအသိုင်းအ၀ိုင်းကို မျှဝေပေး ချင်တယ်ဆိုရင် တွန့်ဆုတ်မနေဘဲ သင့်အကြောင်းအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ဆီ ပို့လိုက်ပါ(အဆုံးသတ်မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိပါဘူး) ကျနော်တို့ရဲ့ အီးမေးလ် လိပ်စာကို ပို့လိုက်ပါ: blog@fbs.com.
Forex ထရိတ်ဒါများရဲ့ ဘ၀တွေထဲက စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာများ၊စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေသာအကြောင်းအရာများ၊ သင်ယူစရာများ၊ဟာသများနှင့် ထင်ရှားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တင်ပေးသွားမှာပါ - စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ!